Kooxda Uu Taageeri Doono Finalka Champions League, Awooda Liverpool & Khibrada Real Madrid Iyo Waxyaabo Uu Ka Hadlay Tababarihii Hore Ee Labada Kooxood Ee Rafa Benitez. – GOOL24.NET
Kooxda Uu Taageeri Doono Finalka Champions League, Awooda Liverpool & Khibrada Real Madrid Iyo Waxyaabo Uu Ka Hadlay Tababarihii Hore Ee Labada Kooxood Ee Rafa Benitez.
Tababare Rafa Benitez ayaa ka mid ah shaqsiyaad gaar ah oo finalka UEFA Champions League uu u noqon doono mid khaas ah waxaana magaalada Kiev ee dalka Ukraine iskagaa hor iman doona laba kooxood oo waayihiisa kubbada cagta muhiimad wayn ku leh. Rafa Benitez ayaa tan iyo markii uu 13 sano jirka ahaa Real Madrid ka soo tirsanaa wuxuuna ka soo noqday tababare halka uu Liverpool kula soo guulaystay koobka Champions League.
Rafa Benitez oo waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya bixiyay ka hor kulanka finalka Champions League ee kooxihiisii hore ee Real Madrid iyo Livrerpool ayaa qiimayn ku sameeyay waxa kulankan laga filan karo. Rafa Benitez ayaa u muuqda mid aan labada kooxood kala jeclayn oo ixitraam wayn u haye balse taasi kamay joojin in uu xaalada ka hadlo.
Rafa Benitez ayaa sheegay in uu noqon doono kulan xiiso badan leh marka ay Real Madrid iyo Liverpool iskaga horyimaadaan finalka Champions League wuxuuna meesha ka saaray in ay jirto koox ugu cad cadi balse waxa uu muujiyay in Real Madrid ay leedahay khibrad wayn halka Liverpool uu ku sifeeyay koox xoganaan wayn ku ciyaarta.
Markii Rafa Benitez la waydiiyay kooxda uu taageeri doono Real Madrid iyo Liverpool waxa uu yidhi: “Anigu waxaan ixtiraam badan u hayaa Liverpool iyo Real Madrid. Waxa aan samayn karo oo dhan ayaa ah in aan sugo… oo aan u ogolaano in ragga ugu fiicani guulaystaan”.
Kadib Rafa Benitez ayaa la waydiiyay marka laga yimaado ka taageere labada kooxaha ahaan sida ay tahay aragtidiisa ka kubba cagta ahaan ee labada kooxood wuxuuna yidhi: ” Waxa uu noqon doonaa final xiiso badan,markaa aad aragto kulamadii Real Madrid ee Juventus iyo Bayern, waxaad xaqiijisanaysaa in ay leeyihiin khibrad iyo tayo oo ay garanayaan sida loola tacaalo kulamada xaaladaha aadka u adag taasi waa wax dheeraad ah”.
Rafa Benitez oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Dhinaca kale Liverpool, waxay ku ciyaartaa awood badan, tayo iyo xawaare. Xawaaraha Premier League waxa uu aad uga sareeyaa horyaalada kale sida aad tusaale ahaan naftiinuba arki kartan kulankii Roma”.
Intaa kadib Rafa Benitez ayaa la waydiiyay haddii Real Madrid ay si toos ah u tahay kooxda ugu cad cad ee finalka Champions League wuxuuna yidhi: “Maya. Natiijadu way furan tahay. Labaduba waxay haystaan doorashooyin ay ku guulaystaan. Gool dhinac ah ama dhinaca kale ah ayaa wax walba badali kara, wax walba way dhici karaan”.